ဗေဒင် | ကွန်ပျူ ဗေဒသုခုမ
ဗေဒင်	# ဇွန်လအတွက် (၇) ရက် သားသမီး ဗေဒင်Published June 3, 2013 | By Dr.Tin Bo Bo	.
Posted in မဟာဘုတ်, မြန်မာ့ရိုးရာ ဗေဒင် | Tagged (၇)ရက် သားသမီး ဗေဒင်, ဒီလ ဗေဒင်, မဟာဘုတ်, မဟာဘုတ် ဗေဒင်, လစဉ် ဗေဒင်, ဧပြီလ, ဧပြီလ အတွက် ၇ ရက် သားသမီး ဗေဒင်, ဗေဒင်, မြန်မာ့ရိုးရာ ဗေဒင်, ၇ ရက် သားသမီး | 45 Comments	# မွေးနေ့ဗေဒင်တွက်ကြမယ် (၂)Published March 20, 2013 | By Dr.Tin Bo Bo	မွေးနေ့ဗေဒင်တွက်ကြမယ် အပိုင်း (၁)ကို ၂၀၁၀ ခုနှစ် မတ်လထဲမှာ စ, တင်ပေးလိုက်တဲ့ အချိန်ကစပြီး ယနေ့အချိန်အထိ အဖတ်အများဆုံး ဆောင်းပါးထဲမှာ နံပါတ်(၄)နေရာ ကို ချိတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ၀င်ရောက်ဖတ်ရှုသူဦးရေ သုံးသောင်းနီးပါး ရှိခဲ့တယ်။ တိုက်ဆိုင်မှု အတော်ရှိတယ်လို့လည်း အကြောင်းပြန်ကြားချက်တွေ ကြားရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ခက်တာက ယနေ့အချိန်အထိ အဲဒီတွက်နည်းကို ကောင်းကောင်း မတွက်တတ်ကြတဲ့ သူတွေ ရှိနေသေးတယ်။ တစ်ချို့ကြပြန်တော့လည်း မှန်အောင်တော့ တွက်တတ်ပါတယ် - ဒါပေမယ့် အဖြေကို ကောင်းကောင်းမထုတ်တတ်ဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လည်းဆိုတော့ ထည့်သွင်းတွက်ချက်ရတဲ့ ဂြိုဟ်တွေက မွေးနံဂြိုဟ်အပါအ၀င် (၆)လုံးတောင် ဖြစ်နေတော့ အပေါ်အောက် ဂြိုဟ်တွေ ပြန့်ကျဲနေရင် အကောင်းအဆိုး ဘာပြောရမှန်း မသိကြတော့ဘူး ဆိုတာတွေလည်း ရှိပါတယ်။ ဒီတော့ ကျွန်တော့်အနေနဲ့ မွေးနေ့ဗေဒင်တွက်နည်းကို ဒီထက် လွယ်ကူအောင် စဉ်းစားရပါတော့တယ်။ လွယ်ကူတဲ့ နည်းသစ်ကလေးတွေ တီထွင်ရပါတယ်။ တီထွင်ယုံနဲ့ မပြီးဘဲ လက်တွေ့မှန်ကန်မှုကော ဘယ်လောက်ရှိလဲ ဆိုတာကို စမ်းသပ်ရပါသေးတယ်။ လက်တွေ့မှန်ကန်မှု (၇၀)% အထက်ရှိပြီဆိုတဲ့ နည်းကိုသာ ရွေးချယ်လိုက်ပြီး (၇၀)% အောက်ဆိုရင် ပယ်ပစ် လိုက်ပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ ပိုမိုလွယ်ကူတဲ့ မွေးနေ့ဗေဒင်တွက်နည်း လေးတွေ ထပ်မံရရှိလာပါတယ်။ အဲဒီထဲက လွယ်ကူတဲ့ နည်းလမ်းတစ်ခုကို “မွေးနေ့ဗေဒင်တွက်နည်း (၂)” အဖြစ် တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။ စာဖတ်သူများအတွက် တွက်ရ/ဟောရ ပိုမိုလွယ်ကူတဲ့ နည်းလမ်းလေးတစ်ခု ဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ —————————————————————————————————————-
Posted in မဟာဘုတ်, မြန်မာ့ရိုးရာ ဗေဒင် | Tagged ကိုယ်တိုင်တွက် ဗေဒင်, မဟာဘုတ် ဗေဒင်, ဗေဒင်, ဗေဒင် ကိုယ်တိုင်တွက်နည်း, မွေးနေ့ဗေဒင်, မြန်မာ့ရိုးရာ ဗေဒင် | 137 Comments	# မတ်လ အတွက် (၇)ရက်သားသမီး ဟောကိန်း အကျဉ်းPublished March 1, 2013 | By Dr.Tin Bo Bo	(အပျင်းပြေဖတ်ရန်မျှသာ)
Posted in နာမက္ခရဗေဒ, မဟာဘုတ်, သင်္ချာဗေဒ, မြန်မာ့ရိုးရာ ဗေဒင် | Tagged နာမည်ပေး ဗေဒင်, နာမည်ပေးနည်း, ရင်သွေး ကံကြမ္မာ, နေ့စဉ် ဟောကိန်း, နေ့စဉ်မွေးဖွား ရင်သွေးများ, ဗေဒင်, ဗေဒင် online, မြန်မာ့ရိုးရာ ဗေဒင် | 69 Comments	# နဂါးနှစ် လာပြီPublished January 29, 2012 | By Dr.Tin Bo Bo	.
Posted in အင်္ဂ၀ိဇ္ဖာ/မဟာကာလ, မြန်မာ့ရိုးရာ ဗေဒင် | Tagged MaHaBote, Myanmar Astrology, Myanmar Astrology 2011, myanmar horoscope, myanmar zodiac, မဟာဘုတ်, အင်္ဂ၀ိဇ္ဇာ, ဗေဒင်, မြန်မာ ဗေဒင်, မြန်မာ့ ရိုးရာဗေဒင်, မြန်မာ့ ဗေဒင်, မြန်မာ့ရိုးရာ ဗေဒင်	# (၇)ရက်သားသမီးများအတွက် သြဂုတ်လ ဟောကိန်းများPublished August 5, 2011 | By Dr.Tin Bo Bo	.
Posted in မဟာဘုတ်, မြန်မာ့ရိုးရာ ဗေဒင် | Tagged (၇)ရက် သားသမီး ဗေဒင်, MaHaBote, MaHaBote Astrology, Myanmar Astrology, myanmar horoscope, မဟာဘုတ်, ဗေဒင်, မြန်မာ့ ရိုးရာဗေဒင်, မြန်မာ့ ဗေဒင်	Reports to my Friends !
# လျှပ်တစ်ပြက်ဗေဒင် (60,846)# 2013 ခုနှစ် (၁၂)ရာသီခွင် ဟောကိန်းများ (49,491)# 2012 ခုနှစ် (၁၂)ရာသီခွင် ဟောကိန်းများ (47,209)# မွေးနေ့ဗေဒင် တွက်ကြမယ် (၁) (32,052)# အလွယ်ဆုံး ဗေဒင်မေးနည်း (24,078)# (3)ဂဏန်းသမားများ အကြောင်း တစေ့တစောင်း (15,404)# (4)ဂဏန်းသမားများ အကြောင်း တစေ့တစောင်း (13,225)# (8)ဂဏန်းသမားများ အကြောင်း တစေ့တစောင်း (12,723)# (9)ဂဏန်းသမားများ အကြောင်း တစေ့တစောင်း (11,772)# ဧပြီလ အတွက် (၇)ရက် သားသမီးဗေဒင် (10,416)# ဧပြီလ (၇)ရက်သားသမီး ဗေဒင် (10,357)# နာမည်သည် နောက်ဆုံးအဖြေလော? (10,230)# မဟာဘုတ် စစ်တမ်း (10,168)# ဒီဇင်ဘာလ(၇)ရက်သားသမီးဗေဒင် (10,137)# နဂါးနှစ် လာပြီ (9,458)# ၁၂ ရာသီခွင် နှင့် လူသားများ (၂) (9,425)# မွေးနေ့ဗေဒင်တွက်ကြမယ် (၂) (9,110)# သြဂုတ်လအတွက် သင်္ချာဗေဒ ဟောကိန်းများ (8,909)# (1)ဂဏန်းသမားများ အကြောင်း တစေ့တစောင်း (8,773)# အပြောင်းအလဲ များတတ်တဲ့သူ (8,763)# အောက်တိုဘာလ အတွက် (၇)ရက် သားသမီး ဟောကိန်းများ (8,294)# အောက်တိုဘာလ (၇)ရက် သားသမီးဗေဒင် (7,898)# မေလအတွက် (၇)ရက်သားသမီး ဗေဒင် (7,798)# နိုဝင်ဘာလ(၇)ရက်သားသမီးဗေဒင် (7,746)# မတ်လ (၇)ရက် သားသမီး ဗေဒင် (7,615)# (၀)ကြွင်း မဟာဘုတ် ဖွား များ၏ ယေဘူယျဝိသေသ လက္ခဏာများ (7,574)# စက်တင်ဘာလ အတွက် (၇)ရက် သားသမီး ဟောကိန်းများ (7,357)# မြန်မာသက္ကရာဇ် (၁၃၇၅)ခုနှစ် (၇)ရက်သားသမီး ဟောကိန်းများ (7,233)# မွေးနေ့ မွေးရက် ထပ်တူကျခဲ့လျှင် . . . (7,168)# ၁၂ ရာသီခွင် နှင့် လူသားများ (၁) (7,081)	အားပေးတယ်ဆို Like လုပ်ခဲ့နော် !